Al-Shabaab oo gobolka Waqooyi Bari ku laayey dad Kenyaan ahaa – Hornafrik Media Network
Al-Shabaab oo gobolka Waqooyi Bari ku laayey dad Kenyaan ahaa
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay in sagaal ruux ay ku dileen weerar ay ka fuliyeen duleedka magaalada Gaarisa ee gudaha dalka Kenya.
Weerarkaas ayaa ka dhacay Tuulo lagu magacaabo Harbuul oo qiyaastii 53KM u jirta magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya.
Al-Shabaab ayaa war ay ka soo saareen weerarkaas ku sheegay in sagaalka ruux ee ay dileen ay dhamaantood hubiyeen inaysan muslin aheyn, isla markaana ay ahaayeen shaqaale ka tirsanaa dowladda Kenya, sida ay warkooda u dhigeen.
Al-Shabaab ayaa todobaadyo ka hor duleedka magaalada Wajeer waxa ay ku dileen ku dhawaad 10 ruux oo sida ay sheegeen aan heysan diinta islaamka, kadib markii ay labo u kala saareen dad saarnaa gaari bas ah, waxayna dadkaii ay dileen u badnaayeen saraakiil ka tirsaneed booliska Kenya.
Dowladda Kenya ayaa dhankeeda weerarkaas ku eedeysay inuu hoggaaminayey nin Macalin ka ahaan jiray iskuul ku yaalla degmada Wajeer, kaas oo markii ugu war danbeysay soo galay gudaha Soomaaliya sida lagu sheegay war Kenya ay ka soo saartay weerarkaas, iyadoo ku goodisay inay talaabo qaadi doonto.
Nin walaalkiis ku dilay Dhuusamareeb
Aqalka Wakiilada oo maanta u codeynaya xil ka qaadista Trump